Can/ Could ~ ကျိုက္ခမီသားလင်းနိုင်ဦး
အသစ်မရေးဖို့ မအားလို့ အဟောင်းပြန်တင် ။ မဖတ်ရသေးသူ အတွက် အသစ် ၊ သိပြီးသူများ လည်း ပြန်နွေးနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။
Can နိုင်သည် ၊ Can နိုင်သည်။ Can ရဲ့ Past Tense- Could အဲ့ဒီလို မှတ်တာ ကလေးငယ်ဘ၀မှာ ကိစ္စမရှိသေးပေမယ့် Level မြင့်လာသည်အထိ အဲ့ဒီလိုပဲ စွဲမှတ်ထားရင် နာလည်မှုအပိုင်းမှာ တော်တော် ဒုက္ခပေးနိုင်ပါတယ်။ Level အလိုက် ပြောင်းလာသလို၊ သုံးပုံ ၊ သုံးနည်းကိုလည်း ကလေးအဆင့်က မှတ်ထားတာလောက်နဲ့ ရပ်မထား သင့်ဘူး။ ဒါကြောင့် မသိသေးသော သူများ၊ ရှုပ်နေသောသူများ အတွက် ကျွန်တော်လေ့လာထားသလောက်ကို ရှင်းပါမယ်။
နံပါတ် (၁) အားလုံးရင်းနှီးတဲ့ ..နိုင်သည်.... ကနေပဲ စလေ့လာကြတာပေါ့။
လုပ်နိုင်တယ်၊ တတ်တယ် ပေါ့ ။ အင်္ဂလိပ်လိုတော့ You know how to do it.
Ability:ရှိတာပေါ့ဗျာ။ တစ်စုံတစ်ခုကို လုပ်တတ်ဖို့ဆိုတာ Skill ( ကျွမ်းကျင်မှု ) လိုအပ်တယ်။ ထို ကျွမ်းကျင်မှုကိုရဖို့ ၊ လုပ်ဆောင်မှုနဲ့ အချိန်လိုအပ်တယ်။
- ဥပမာ.. ဘာသာစကား အမျိုးမျိုး ပြောတတ်ဖို့ လေ့လာအားထုတ်မှု၊ အချိန်လိုအပ်တယ်။
> She can speak several languages.
ငါးတစ်ကောင်လို ရေကူးတတ်တယ်။ ဒါလည်း ( ability Or Skill ) ပဲ။ ဒီလို ကျွမ်းကျင်ဖို့ အချိန်၊ လေ့ကျင့်မှုလိုတယ်။
> He can swim likeafish.
သူက ဒီ သေတ္တာကို မနိုင်တယ်။
> He can lift this box.
လေးတဲ့ သေတ္တာကို မနိုင်ဖို့ သန်မာဖို့လိုတယ်..အဲ့လို သန်မာဖို့ လေ့ကျင့်ဖို့လိုတယ်။ တစ်ချို့များကြတော့ Superman လို မွေးကတည်းက သန်မာတာ.. ( General abilities ) ရှိတာပေါ့လေ။ ဘာပဲပြောပြော..Can ရဲ့ နံပါတ် ( ၁ ) အသုံးက .. Skill or general ability )
- အဲ့ဒီလို Skill or ability မရှိရင်တော့ အငြင်းကိန်း Cannot , Can't ပေါ့။
ှု I can't speak Chinese.
သူရဲ့ Past Tense က...Could / was able to / Managed to ./ succeeded in
- General ability သက်သက်ကို ပြောချင်ရင်. Could . ဥပမာ..
ကျွန်တော်ငယ်ငယ်က အရမ်း အပြေးသန်တာ။ ငယ်စဉ်ကဆိုတော့ အတိတ်။..ကိုယ့်ရဲ့ အတိတ်က ရှိခဲ့သော Skill ၊ ability ကိုပြောပြရုံပဲဆိုတော့
I could swim when I was6years old.
- ဒီနေရာမှာ was able to ကို သုံးလည်းရပါတယ်။
I was able to swim when I was6years old.
My sister could talk when she was 15 months old. စသည်ဖြင့်..
သို့သော် တိကျသော အခြေအနေ ၊ သီးခြား အခြေအနေမှာတော့ was/were able to ကိုသုံးရတယ်။
Even though I'd hurt my leg, I was able to swim back to the boat.
ခြေထောက်နာနေတဲ့ အခြေအနေမှာတောင် သူက ရောက်အောင် ကူးနိုင်တယ်ဆိုတော့ ....
ဒီလိုအခြေအနေမှာ Could ကို သုံးလို့ မရပါဘူး။ ငယ်စဉ်က ကြားဖူးတဲ့ ဥပမာလေးနဲ့ ရှင်းပြချင်ပါတယ်။ နယူတန်ဟာ အိမ်မှာ ကြောင်မကြီး ကလေးမွေးတော့ ကြောင်မကြီးအတွက် အပေါက်တစ်ပေါက် ၊ ကြောင်ကလေးတွေ အတွက် အပေါက်တစ်ပေါက် ဖောက်ပေးတယ်တဲ့။ ပညာရှင်ဆိုတော့ အတွေးအသေးစိတ် အတွေးလွန်သွားတာ နေမယ်.. ဒါလေးကို ဥပမာယူပြီး ပြောပြချင်တယ်. ကြောင် ပေါက်စလေးတွေ ဟာ သူ့အမေကြီးအတွက် ဖောက်ပေးထားတဲ့ အပေါက်ကိုလည်း ၀င်လို့ရတယ်.. သူတို့နဲ့ ဆန့်တာကိုး.၊ ကြောင်မကြီးကတော့ ကြောင်လေးတွေအတွက် ဖောက်ထားတဲ့ အပေါက်သေးသေးလေးကို မဆန့်တော့ ၀င်လို့မရဘူး။ was able to က ကြောင်ပေါက်ကလေးနဲ့ တူတယ်..သူက အခြေအနေ နှစ်ရပ်လုံးမှာ သုံးနိုင်တယ်။
Could က ကြောင်မကြီးနဲ့ တူတယ်.. General ability မှာပဲ သုံးနိုင်ပြီး ၊ အတိတ်မှာ အခြေအနေတစ်ခုမှာ လုပ်ခဲ့သော စွမ်းရည် ၊ လုပ်နိုင်ခဲ့မှုကို ပြောချင်ရင် was able to နေရာမှာ Could က ၀င်သုံးလို့ မရပါဘူး။
The manager wasn't in the office for very long, but we were able to speak to him forafew minutes.
မန်နေဂျာက ရုံးမှာ အကြာကြီး မရှိခဲ့ဘူး .. ဒါပေမယ့် ငါတို့ သူကို စကားခဏတော့ ပြောနိုင်ခဲ့တယ်။
-.ကျွန်တော် ငယ်ငယ်က မီတာ ၁၀၀ ကို အလွန် မမောပဲ ကူးနိုင်တယ်။ ( Could )
- မြင်းကပါမှာ စီးချင်းထိုးတာ နောက်ဆုံးမှာ စုက္ကတေးမင်းကို အနော်ရထာက အသည်းအသန် အနိုင်ယူနိင်ခဲ့တယ်။ ( was able to / managed to / succeeded in )
- အနော်ရထာမင်းကြီးဟာ တိုင်းသူ ပြည်သားတွေကို ကြွယ်ဝပြည့်စုံစွာ ထားနိုင်ခဲ့တယ်။ ( Could )
- မနေ့က မီးလောင်တဲ့ ရွာကို အ၀တ်အစားတွေသွားလှူတာ ..လူတွေက အရမ်းများတော့ မလောက်ဘူးထင်တာ.. ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ လောက်ငှအောင် လုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်။ ( was able to / managed to )
- ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတွင် လူများအား စည်းရုံးနိုင်သော အရည်အချင်းရှိခဲ့တယ်။ ( Could )
- ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်းသည် ပင်လုံစာချုပ် ချုပ်ဆိုရန် တိုင်းရင်းသားများအား အချိန်မီ စည်းရုံးနိုင်ခဲ့သည်။ ( was able to / managed to / succeeded in )
- Maria was able to swim to the rocks and rescue the child.
- သူရဲ့ အငြင်းကိန်းကတော့ ရှင်းပါတယ်.....မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ ၊ လုပ်နိုင်တဲ့ အရည်အချင်း ( Skill / ability ) မရှိ ၊ အခြေတစ်ရပ်မှာလည်း လုပ်ခဲ့တာ မရှိဆိုတော့ ခေါင်းစားခံပြီး was/were able to လား ၊ Could လားတွေးစရာမလိုတော့ဘူးလေ။ .....မလုပ်ခဲ့နိုင်မှတော့.တိကျသော အခြေအနေ တစ်ရပ်မှာ မလုပ်နိုင်နိင်ခဲ့ဘူး.. ဒီတော့ Couldn't ပဲ။.. wasn't able to / weren't able to သုံးလည်းရတယ်.။
He tried very hard, but he couldn't swim back to the boat.
- အတိတ်မှာ သီးခြားအခြေအနေ တစ်ရပ် တကယ်လုပ်နိုင်ခဲ့တယ်..ဒါပေမဲ့ Action ကို မပြသော.. The verbs of Perception တွေ... see, hear, smell, taste, feel .
AS son as I walked into the room, I could smell gas.
I could feel my heart bumping.
Everyone in the village could hear her voice.
I could seeafew faint stars inaclear patch of sky.
Suddenly she realised she cold smell something burning.
Some verbs of thinking .believe, decided, understand, remember, စသည်တို့ကိုတော့ မှာ Can ရဲ့ Past က Could ပါ။
I could remember the crash, but nothing after that.
I could understand everything she said.
Inter- level အဆင့်မှာ .. We can use be able to instead of can ..but Can is more common. လို့ဆိုတယ်..
Advanced Level မှာတော့ အသေးထပ်စိတ်ပါတယ်။
(A) ပြောနေတဲ့အချိန်မှာ လုပ်နေနိုင်တာကို ပြောရင် .. Can..
Watch me, Mum; I can stand on one leg. ( I'm able to stand on one leg လို့ မသုံးပါဘူးတဲ့.. ( မှားတယ်လို့ ပြောတာ မဟုတ်ပါဘူး )
(B) before passives. ( Passive တွေရဲ့ ရှေ့ )
Valuables can be left in the hotel safe. Please ask at the reception desk.
( Valuables are able to be left .....ပုံစံကို မသုံးပါဘူး... ( more natural မဖြစ်တာ )
( C) When the meaning is " Know how to ." ( လုပ်နည်း ၊ ကိုင်နည်း သိတာ)
Are you able to drive ?
Are you able to cook ? တွေဟာ မှားတယ်လို့ မဆိုလိုဘူး...သူတို့ထက်.. Can you cook ? .. စသည်ဖြင့် လုပ်နည်းကိုင်နည်းကို သိလား ၊ လုပ်တတ်လားဆိုတဲ့ ပုံစံက - More natural ကြတာပါ။
(D) ခက်ခက်ခဲခဲ လုပ်ပြီးရလာတဲ့ ပုံစံမျိုးကို be able to သုံး ၊ can လည်း ရ...
Harry can't speak, but he is able to communicate with sign language.
(E) Can မှာ Present ရှိတယ်၊ Past ပုံစံတွေလည်း လေ့လာခဲ့ပြီးပြီ၊ အနာဂတ်ကို ဖော်ပြချင်ရင် ..... အနာဂတ်ကိုဖော်ပြတဲ့ စကားလုံးတွေ ပါရတယ်..
I can't sleep. ( Present )
I can come tomorrow. ( Future )
I could run fast when I was young. ( Past )
I was able to / managed to / succeeded in .......( past )
သို့သော် .. Perfect ပုံစံ သုံးမယ်၊ တခြား အကူကြိယာတွေနဲ့ တွဲသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ be able to ကို မဖြစ်မနေ သုံးရပါတယ်။
I haven't been able to sleep for3days. အိပ်မရတာ သုံးရက်ရှိပြီဗျာ.
I haven't been able to fine the answer yet.
ဒီလိုပဲ.. မစားနိုင်တာ တစ်ပတ်ရှိပြီတို့၊
လမ်းမလျှောက်နိုင်တာ တစ်လရှိပြီတို့.. သုံးတော့...
Haven't been able to + V1 ( infinitive )
- တခြား အကူ ကြိယာတွေနဲ့ တွဲသုံးဖို့ လိုအပ်တဲ့အခါ....
- I can come tomorrow ..
> I might be able to come to come tomorrow.
- I can finish this tomorrow.
> I will be able to finish this tomorrow.
> I will be able to speak French at the end of this course.
- I used to be able to sing well.
- I'd like to be able to play the piano.
- I've never been able to get up early.
" Could" can be regarded as the past tense of " can" if you are simply talkingabout the ability ofaperson or thing to do something.
For example, If you are talking aboutaliving person, you can say " He can speak Russian and Finnish." If you are talking aboutadead person, you can say " He could speak Russian and Finnish."
- After the phrases the only thing /place/ time, and after all when it means" the only thing:
- to suggest that something almost didn't happen, Particularly with almost, hardly, just, nearly..
I could nearly touch the ceiling.
ကိုးကား... Advanced Grammar in Use : Martin Hewings.
Macmillan English Grammar in Context : Michal Vince
Collins Cobuild English Grammar For Teachers of English
The Heineman English Grammar . Digby Beaumont >Colin Granger
English Grammar in Use : Raymond Murphy
Can ရဲ့ ကျန်နေသော ခေါင်းမှုးဖွယ် အပိုင်းများကို ဆက်လက်ရေးသားပါမည်။
အနှစ်ချုပ်ရသော်... Can ၏ ability အသုံးမှာ ... General Ability က Could.
The verbs of Perception တွေ... see, hear, smell, taste, feel .တွေ၊
Some verbs of thinking .believe, decided, understand, remember, မှာ Could ,
specific situation - မှာဆိုရင် ..was able to /managed to / succeeded in ...အသည်းအသန်လုပ်တယ်.. လိုဘာသာပြန်လို့ရပါတယ်။ ...
ယခု ရေးသော အရာမှာ အပိုင်းတစ်ခုပဲ ရှိပါသေးတယ် ခင်ဗျာ..
အဆုံးအထိ သေသေချာချာ ဖတ်သောသူများအား ပြောချင်ပါတယ်.။ ဒီလိုလေ့လာမှုက Learner တွေအတွက်ပါ၊ User တွေ အတွက်တော့ မလိုပါဘူး။ တကယ်တော့ စာဖတ်တာက အကောင်းဆုံးပါ
Can ရဲ့ အသုံးများကို အသေးစိတ် ရေးသားနေရာ.
မနေ့က နံပါတ် (၁) .ability . နဲ့အသုံးကို ရေးခဲ့ပါတယ်။
သူ့ရဲ့ Past Tense က.. general ability မှာ could
( Specific situation ) မှာ was /were able to / managed to / succeeded in ပုံစံသုံးပြီး၊
Present Perfect ပုံစံဆိုရင် Has/Have been able to၊ အကူကြိယာတွေနဲ့ ထပ်ပေါင်းရေးမယ်ဆိုရင် be able to နဲ့သုံးရသည်.. စသည်ဖြင့် ရေးခဲ့ပါတယ်။
ဒီနေ့တော့ Permission အဓိပ္ပါယ်နဲ့ ရေးပါမယ်။
နံပါတ် (၂) Permission: ခွင့်ပြုခြင်းဆိုင်သော အကြောင်းမှာကို ပြောဆိုလိုသော အခါမှာ သုံးပါတယ်။
(A) We use can to give permission:
- Can ကို ခွင့်ပြုခြင်းကို ဖော်ပြတဲ့အခါ သုံးပါတယ်။
> You can go home now if you like.
အိမ် ပြန်ချင်ရင် ပြန်လို့ရတယ်။
> You can borrow my pen if you like.
ငါ့ ဘောပင် ငှားသုံးလို့ရပါတယ်။
- You can driveavan up to 3- ton capacity using an ordinary driving licence.
- You can go off duty now.
- She can go with you.
Formal - ပုံစံဆိုရင် ဒီနေရာမှာ- May အစားထိုးသုံးလို့ရပါတယ်။
- You may speak.
-They may do exactly as they like.
(B) We use can to say that someone has permission to do something:
- တစ်စုံတစ်ခုကို လုပ်ဖို့ရန် ခွင့်ပြုချက် ရှိတာကို ဖော်ပြရာမှာလည်း သုံးပါတယ်။
> We can go out whenever we want.
သွားချင်တဲ့အချိန် ငါတို့ အပြင်သွားလို့ရတယ်.
> Students can travel free.
ကျောင်းသားများ အခမဲ့ ။ ( စီးနိုင်ပါတယ် ) ခရီးသွားနိုင်တယ်။
> Students can use calculators during the exam.
စာမေးပွဲမှာ calculators သုံးခွင့်ရှိပါတယ်။
- We are totally free. We can do what we want.
- You can read my book.
- You can park over there.
- You can haveapiece of cake after you've eaten your vegetables!
- Any police officer can insist on seeingadriver's license.
(C) We use can to ask for permission to do something:
( ရမလား ၊ ပါရစေ )
(.ရိုးရိုးဝါကျက ခွင့်ပြုချက်ပေးတယ် ၊ရှိတယ်၊ .မေးခွန်းလုပ်တော့ ခွင့်ပြုချက်တောင်းခံတယ် ဖြစ်သွားတာပေါ့။ က .. Permission to do ဆိုတော့ မေးခွန်းပြောင်းတော့ ask for permission တောင်းခံတယ်ပေါ့ဗျာ။ )
> Can I askaquestion, please?
တစ်ခုလောက် မေးလို့ရမလား ခင်ဗျာ။
> Can we go home now?
> Can I have some ?
ငါ့ကို လည်းပေးပါအုံး။ ( ဥပမာ.. တခြားသူ ထံမှက မုန့်တွေ ၊စားစရာတောင်းတာ မျိုး )
- Can I take him forawalk?
- Can I haveapiece of paper please?
ဒီနေရာမှာ သုံးတဲ့ Could က Past Tense မဟုတ်ဘူးဆိုတာ သိရမယ်။ ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေးနဲ့သုံးလိုက်တာပါ။ ဒါကြောင့် Can ရဲ့Past ဟာ Could အမြဲမဟုတ်သလို.. Could တိုင်းကလည်းCan ရဲ့ Past မဟုတ်ဘူးဆိုတာ မှတ်သားသင့်တယ်။
Could you lend me ten kyats?
ကျွန်တော် နောက်ထပ် ပေါင်မုန့်များ ရနိုင်ပါသေးသလား။ လို့ ( မ၀ံမရဲ သဘောပါအောင် ) ယဉ်ကျေးတဲ့ ပုံစံမှာ သုံးတယ်လို့ ဆရာဦးသာနိုးရဲ့ English Elements of the Language မှာ သုံးရှင်းပြထားပါတယ်။
Could I sit hereaminute, Joyce?
Could you sign one of these too? Would you mind?
(D) We use can't to forbid ( say what you must not do )
ရိုးရိုးဝါကျဟာ ခွင့်ပြုချက်ပေးတယ်၊ ခွင့်ပြုချက်ရှိတယ် ဆိုတော့ အငြင်းကိန်းဟာ ခွင့်ပြုချက် မပေးဘူး၊ လုပ်ပိုင်ခွင့် မပေးဘူးပေါ့။ ဥာဏ်ကို လွှာပြီးသုံးရင်လွယ်ပါတယ်။
> You can't park there- It'sano parking zone.
> You can't go home now.
> You can't wear jeans at work.
ability နဲ့ Permission ရောပြီး ယှဉ်ကြည့်ရအောင်။.
I can't speak English. က ability မရှိတာ. ငါအင်္ဂလိပ်စကား မပြောတတ်ဘူး။
I can't park my car here. က Permission မရှိတာ။ ငါ့ကားကို ဒီမှာ ထိုးလို့မရဘူး။ ဒါကြောင့် အကုန်လုံးကို နိုင်သည် ၊ နိုင်သည် ဘာသာပြန်ရင် အဆင်မပြေဘူး။
- I can watch TV as I like . ( ခွင့်ပြု )
I can play the piano. ငါ စန္ဒရားတီးတတ်တယ်။ ( တီးတတ်ဖို့ Skill လိုတယ် ၊
Skill တစ်ခုရဖို့ အကြားကြီး ကြိုးစားရပါတယ်)
She could play the piano when she was six.
She was able to play the piano very well at her friend's birthday party though she had been out of touch with it for ages.
သူကို သူငယ်ချင်းတွေက မနေ့က ပါတီပွဲမှာ အတင်းတီးခိုင်းတော့ မတီးတာကြာသည့်ကြားက အကောင်းဆုံးတီးနိုင်ခဲ့ဆိုတဲ့ ပုံစံမျိုးမှာ Could သုံးလို့ မရဘူး။
ဒီလိုပဲ .... Permission အဓိပ္ပါနယ်နဲ့သုံးတဲ့ Can ရဲ့ Past Tense ဟာ .General Permission ဆိုရင် Could .
> When I wasachild, I could watch TV whenever I wanted to.
> We could go to any part of the island we wanted to.
ကလေးတုန်းကဆို TV ကို ကြည့်ချင်တဲ့ အချိန်တိုင်း ကြည့်လို့ရတယ်။ ( General Permission ) ပါ ..ဒီလို အတိတ်မှာ ယေဘုယျ သဘော ခွင့်ပြုချက်ရှိခဲ့တာကို ပြောတဲ့အခါ Permission -Can ရဲ့ Past Tense က Could ဖြစ်ပေမယ့်..
(မနေ့က ညနေခင်းက ပီတာကို တစ်နာရီကြာ TV ကြည့်ခွင့်ပေးခဲ့တယ်။ )
ဒီလိုအခြေအနေ ၊သီးခြား အခြေအနေမှာတော့ Could သုံးလို့မရပါဘူး။ Was/were allowed to ပုံစံကို သုံးရပါတယ်။
- Anyone was allowed to fish in the lake when the council owned it. or
Anyone could fish in the lake when the council owned it.
- Although he didn't haveaticket, Ken was allowed to come in. ဒီနေရာမှာတော့ Could သုံးလို့မရတော့ပါဘူး။
သူရဲ့ အငြင်းကိန်းကတော့ ရှင်းပါတယ်.. အတိတ်မှာ ခွင့်ပြုချက်မှ မရှိခဲ့တော့ Particular Past action လည်း မရှိဘူး။ ဒီတော့ ကြိုက်ရာသုံးလို့ရပါတယ်။ မမှားဖို့က Particular Past action ..ရိုးရိုးဝါကျ မှာ was/were allowed to သုံးဖို့ပါပဲ။
We couldn't open the presents until Christmas morning.
We weren't allowed to open the presents until Christmas morning.
(1) ability . Can - Could ( general ability )
Can - was/ were able to ( specific achievement )
- managed to
- succeeded in
can't - Couldn't ( was/ were able to လည်း ရ)
(2) permission Can - Could ( General Permission )
- was/were allowed to ( Particular past action
can't - Couldn't ( was/ were allowed to )
- We can buy one comic each.
- We were allowed to buy one comic each.
-However, we do use Could to talk about past permission in reported speech.
Mum said we could buy one comich each.
- We didn't know we could could see her.
- She had the nerve to ask me if she could sit at the end of our table.
- If you finish early you can go home.
- She can come whenever she likes, as far as I'm concerned.
- Finish up your dinner and you can have dessert.
- How early can you get off this afternoon?
- Anyone can go - you don't have to be invited.
-You can borrow my calculator if you want.
- Anyone aged 18 or over can vote inageneral election.
- You can’t sit there. Those seats are reserved.
- Only the President could order the armed forces into battle.
- Can is used in standard spoken English when asking for permission. Could is slightly more formal. Both of these are acceptable in most forms of written English, although in very formal writing, such as official instructions, may is usually used instead.
: Macmillan English Dictionary for Advanced Learners 2nd Edition.
: Cambridge Advanced Learner's Dictionary 3rd Edition
: Oxford Advanced Learner's Dictionary 9th Edition
: Advanced Grammar in Use : Martin Hewings.
: Macmillan English Grammar in Context : Michal Vince
: Collins Cobuild English Grammar For Teachers of English.
: English Grammar in Use : Raymond Murphy
: Practical English Usage. Michael Swan
:Macmillan : Destination C1& C2 Grammar & Vocabulary :
: Longman Grammar of Spoken and Written English
: Cambridge English Grammar Today